Sister Zipora na Rachael ọhụụ nke owuwe | Apg29
Sister Zipora na Rachael ọhụụ nke owuwe
"Gịnị mere i ji, mere ọsọ ọsọ ị na-adịghị evangelism? Ike ị na-ahụ? E nweghị ọzọ oge!"
Ihe nile o yiri ka nkịtị, onye ọ bụla okwu ma ọ bụ kwusaara ndị owuwe. Onye ọ bụla yiri echegbu onwe ha. Mgbe mberede, owuwe.
M jụrụ, na mgbe anyị jụrụ bịara mgbe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ọtụtụ ndị mmụọ ozi n'ime ụlọ. Mgbe Michael na Gabriel, na ha meghere ụzọ maka ebube King mgbe ọ bịara. Jesus nnọọ mwute. O tiri ma gosi m ihe m nọ na-eme na mbara igwe ụbọchị abụọ gara aga.
Mgbe ahụ Chineke nyere ihe iji otu mmụọ ozi na-afụ afụ opi ikpeazụ. Mgbe mmụọ ozi ịfụ hụrụ Jizọs n'ụwa. Ọ hụrụ na ịkwa iko, ịkwa iko, ihe ọjọ, ndị mmadụ enweghị uche Chineke.
Mgbe Jizọs hụrụ ya, ọ bugara Nna ụkwụ, daa n'ala ma malite ákwá, jụrụ maka oge, sị:
"Ha na-adịghị njikere!"
Jizọs tiri nke ukwuu, na Nna m bụ otú ọmịiko n'ụwa, ma ọ sịrị:
Ọ bụ na ike gwụrụ nke Iyigharị.
Ma nna ya sịrị mmụọ ozi ahụ:
The angel emeghị jụ ịfụ opi, ma ọ ka na otu ọnọdụ. Jesus mgbe ahụ kwuru, na e kwesịrị ebe ụbọchị abụọ na mbụ. Jizọs tiri, sị:
"Olee ụdị obi na ha? Stone Obi? Ọ bụrụ na m rutere ụbọchị abụọ na mbụ, ọtụtụ ndị a hapụrụ, nwekwara ụfọdụ n'ime ndị ezinụlọ gị. Today ga-abụ ụbọchị na oké mkpagbu."
O kwuru, sị,
"O My ụmụ, bịakwute m ugbu a. The oké mkpagbu ahụ ga-adị otú ahụ egwu. M kwere nkwa ghara ịhapụ ma ọ bụ gbahapụ gị, ma gịnị mere i hapụ m? My obi pines maka My ụmụ ahapụwo m!"
M hụrụ n'anya, n'abalị ikpeazụ m hụrụ ọhụụ nke owuwe. M hụrụ ụwa ji nnọọ ọrụ n'aka na-eme. Ọ bụ na ihe nile ga-anọgide na dị ka ọ ama niile tinyere. M anya nwayọọ nwayọọ na-eje ije ala anyị n'okporo ámá, gbasaghị mgbe m lere anya n'azụ m, Jesus. O kwuru, sị,
M hụrụ na ọ mere na a Sunday, na ọtụtụ na-hapụrụ. Na chọọchị ebe naanị pastọ na nwunye ya wetara, ha bụ nanị ihe ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Nne nwa afọ ime na-apụ n'anya, ma ha fọdụrụ.
M wee hụ ndị Kraịst bụ ndị chere na ha kwesịrị ntụkwasị obi, ma hapụrụ, ha a mpịakọta nke mmehie ha na-dere. M hụrụ a pastọ ndị nọ n'ebe mgbe ọ natara a mpịakọta mmehie mere ka ọ nọrọ. Ọ malitere iti-nkpu:
"Oh dịghị. Ooh!"
"Ya mere, na unu onwe-unu nakwa njikere: n'ihi na ndị dị otú ahụ otu awa dị ka unu na-eche ọ bụghị, Nwa nke mmadụ na-abịa!" Matthew 24: 44
"Cheta Lot hustru.den ndị na-achọ nweta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke na-atụfu ndụ ya ga-azọpụta ya!" Lk.17: 32, 33